Home Wararka War Deg Deg: Farmajo oo Dadaal Xoog leh Ugu Jira inuu Hor...
War Deg Deg: Farmajo oo Dadaal Xoog leh Ugu Jira inuu Hor istaago Qabsoomidda Doorashada Aqalka Sare ee S/Land.
Dadaal xoog leh ayaa hadda ka socda Villada kaas oo uu rabo inuu Farmajo ku hor istaago qabsoomidda doorashada aqalka sare ee Somaliland si uu u burburiyo heshiiskii ay gaareen RW Rooble, Cabdi Xashi iyo Mahadi Guuleed.
Odayaal 8 ah oo kamid ah odayaasha dhaqanka Somaliland ayaa hadda la geeyay Madaxtooyada, Kuwaasoo ku xareysnaa Affisiyooni si aysan uga qeyb qaadan doorashada aqalka sare ee Somaliland.
Farmajo waxaa uu wacad ku maray inaan Somaliya doorasho ka dhaceyn haddiiba uusan isaga iyo Fahad maamuleyn doorashadaas si uu ugu shubto, waxaana geedg gaaban iyo mid dheerba u fuulayaa inuu maalinba meel ka dalooliyo.
Caawana hawshaas ayaa ka socota madaxtooyada si loo joojiyo oo hadal jeedinta ku aadan doorashada Aqalka saree e Somaliland. Odayaasha waxaa laga raba inay degdeg u kala ridaan heshiiskaas waxayna hadda la joogaan Farmajo Villada.
Wixii ku soo kordha waa idinla soo socod siineynaa